दमकको सूर्याेदय बोर्डिङ स्कुलमा भारतको झन्डा हाम्रो र प्रधानमन्त्रीको नाम मोदी पढाइदै, सिधाकुरामा हेर्नुहोस भिडियो::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
प्रकाशित मिति - बुध, जेष्ठ २, २०७५
भारतीय पुस्तक पढाउने झापाको सूर्याेदय बोर्डिङ स्कुललाई कसले कार्वाही गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको नाम मोदी पढाइदै
झापाको दमकस्थीत सूर्योदय अंग्रेजी बोर्डीङ स्कुलले नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियता माथि धावा बोल्दै गलत तथ्यसहितको पुस्तक पढाइरहेको छ । यो बिद्यालयमा पढाई हुने कक्षा १ को न्यू एजुकेशन कन्भर्ससेन नामको पुस्तकमा त हाम्रो देशको नाम भारत, हाम्रो देशको राजधानी दिल्ली र प्रमुख शहर भन्दै भारतीय शहरहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकमा तिम्रो देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भएको भन्दै त्यही पढाईदैछ ।
सूर्योदय इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल दमककी प्रधानाध्यापक म्याग्डेनियल सिहं भारतिय नागरिक भएकै कारण उनले .यी पाठ्यपुस्तको अध्ययन गराउदै आएकी छन् ।
कुनै पनि विद्यालयले पढाउने पुस्तकको बारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमति लिनु पर्छ तर यो विद्यालयलले भने अनुमति नलिई नेपाली राष्ट्रियताको ख्याल नै नगरी भारतीय पब्लिकेशनका पुस्तकहरु पढाई रहेको छ । आभिवावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको बिषयमा गलत शिक्षा दिइरहेको बिद्यालयलाई कडा कारवाही हुनु पर्ने माग गर्दछन् ।
दमक नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको राजपत्रको शिक्षा सम्बन्धिको परिच्छेद ६ को ३ दशमलब ३ नम्बर बुदामा उल्लेख भए अनुसार स्थानिय तहका बिद्यालयमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ भनेर प्रस्टै तोकिएको भए पनि दमकको सुर्योदय इंङलिस बोर्डिङले नगरपालिकाको राजपत्रकै धज्जी उडाएको छ ।
तर पनि नगरपालिकाले स्पष्टिकरण मात्र सोधेर छोडेको छ तर दमक नगर पालिकाका शिक्षा अधिकारी शालिग्राम काफ्ले भने यो विद्यालयललाई कारबाही गर्ने दाबी गर्छन् ।
बाल बालिकाहरुलाई भारतको गुनगान गलाउने र भारतको जयजयकार गराउँदै नेपाली राष्ट्रियताको धज्जी उढाउने खालका पाठ्रय पुस्तक पढाउदै आएको सो विद्यालयकी प्रिन्सिपल भारती नागरिक म्याग्डेनियल सिहं भने यो सामान्य गल्ती वताइरहेकी छिन् ।
भिडियो हेर्न अन्त्य सम्म जानु होला !
राजपरिवारकी सदस्य श्रेया शाहले किन पाईनन् नागरिता ? नागरिकता नपाउँदा मानसिक तनाव
तत्कालीन राजपरीवार सदस्यलाई नै अहिले नेपालको नागरीकता लिन समस्या भएको छ भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर तत्कालिन अधिराजकुमार धिरेन्द्रकी छोरी श्रेया राज्यलक्ष्मी शाहले नागरिकता पाउँ भन्दै दौडिएकी महिनौँ बितीसक्यो ।
८ बर्षको उमेरमा नै नाबालक परीचय पत्रको आधारमा राहधानी बनाएर आमा जया पाण्डे शाहसँग अमेरीका पुगेकी श्रेयालाई अहिले एमआरपी पासपोर्ट चाहिएको छ । जसका लागि नेपाली नागरीकता अनिवार्य छ ।
उनी नेपालको तत्कालीन राज परीवारको सदस्य भएर पनि काठमाडौ महानगरपालिका ३ न वडा कार्यालयले सिफारीस नदिएको कारण उनको नागरीकता बनेको छैन । नेपालीको पहिचानमै जिउन आँफुले अमेरीकी नागरीकता समेत नलिएकी उनी अहिले बिदा मनाउन नेपाल आएपछि फर्किन पाएकी छैनन् । उता उनको कलेज सुरु भएको छ भने यता नागरीकता नपाउँदा मानसिक तनाव छ ।
उनी पटक पटक कामाडौं महानगर पालिका ३ का वडा अध्यक्ष दिपक केसीलाई भेट्न वडा कार्यालय गहिरहन्छिन तर उनको जवाफ तिमी धिरेन्द्रको छोरी हैन सिफारीस दिन मिल्दैन भन्दै हकारेर पठाउँछन् ।
यो बिषयमा हामीले वडा अध्यक्ष दिपक केसीसँग बुझ्दा कानुनी रुपमा उनका बुवा धिरेन्द्र र आमा जया श्रीमान श्रीमती हुन भन्ने नदेखिएपछि सिफारीस दिन नसकिएको बताउँने गरेका छन् ।
तर धिरेन्द्रले २०४४ सालमा नै जया पाण्डेसँग मन्दिरमा बिहे गरेरका थिए । त्यसको एक बर्षपछि २०४५ साल असार २ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा श्रेयाको जन्मभएको थियो । अस्पतालले दिएको बर्थ सर्र्टीफिकेटमा आमाको नाम जया पाण्डे र बाबुको नाम धिरेन्द्र विर विक्रम शाह उल्लेख गरीएको छ ।
यती मात्रै होइन उनले पढेको रातो बंगला स्कुलको रेर्कडमा समेत बाबु धिरेन्द्र विर विक्रम शाह र आमा जया शाह उल्लेख गरीएको छ । उनका बाबु धिरेन्द्र शाह दरबार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका थिए । छोरी ठुली भै अब सँगै बसौँ भनेर अमेरीका बाट श्रेया र जया फर्किने तयारी गर्दा गर्दै यता दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो ।
खाटा बस्न लागेको कहाली लाग्दो इतिहासको घाउ, बाबु जिवित नभएकै कारण नागरीकता नपाउँदा अहिले दिन रात चस्की रहेको छ श्रेयालाई ।
नागरिता पाउनु भन्दा बढी पीडा श्रेयालाई त्यतीबेला भयो जव उन्लाई तिमी धिरेन्द्रकी छोरी नै होईन भनियो । अहिले आँफु धिरेन्द्रकी छोरी प्रमाणित गर्न डिएनए टेष्ट गराउन पनि तयार रहेको बताउँछिन् ।
यो पनि हेर्नुहोस,
राज्यराष्ट्र अवधारणा र जरोकिलो महाअभियानका सम्बन्धमा यसो भन्छन् संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी (भिडीयोसहित )
डा. उपेन्द्र देवकोटाले भनेका थिए :-‘यो संबिधान सँगै गणतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ, सत्ताको लुछाचुँडीले देशको अस्तित्व नै खतरामा’ (भिडियोसहित)
राष्ट्रको लागि राजा महेन्द्रले गर्न नसकेको सम्झौता केपी ओलीले चीनसँग गरेका छन् (भिडियोसहित)
अब जमिन व्यक्तिको हुँदैन, सरकारको हुन्छ: कृषि मन्त्रि खनालको सनसनीखेज खुलासा (भिडियोसहित)
महिलालाई यसरी कुट्ने जग्गा दलालहरु पुगे प्रहरी हिरासतमा, पूर्व आईजीको पावर देखाउने माथि सुरु भयो छानविन (भिडियोसहित)
नेपाली इतिहासको सम्झन लायक पात्र गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह र बिपी मात्रै हुन् : बाबुराम भट्टराई (भिडियोसहित)